Olee otú iji tọghata 3GP ka MOV (QuickTime)? "
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata 3GP ka MOV (QuickTime)
Na ị na-eleghị anya na-abịa gafee ụfọdụ magburu onwe ma ọ bụ funning 3GP videos, ma site na ụfọdụ 3GP video weebụsaịtị ka 3gpvideos.org ma ọ bụ site n'aka ndị ọzọ 'mobile igwe. Ọfọn, nwere ihe echiche iji tọghata ndị a nke gị chọrọ 3GP ka MOV (QuickTime) iji na ị nwere ike igwu ha na QuickTime, ma ọ bụ dezie ha na iMovie ma ọ bụ Final Cut Pro nke na-eme gị ahaziri masterpiece, ọbụna mbubata na iTunes maka mmekọrịta ka iPhone na iPad wdg?
Ọ bụrụ otú ahụ, a dị mkpa 3GP ka MOV Ntụgharị na-ike na-atụ aro gị. Video Ntụgharị-enye gị ohere aghọta 3GP ka MOV akakabarede enweghị ihe ọ bụla video furu Windows platinum. Ezie na Mac mbipute a ngwá ọrụ - Video Ntụgharị maka Mac ike ga-eji iji tọghata 3GP ka MOV na Mac (Snow agụ owuru, Mountain Odum, odum gụnyere).
A nkuzi ebe a na-egosi gị otú ị tọghata 3GP ka MOV (QuickTime) na Windows. Tupu mgbe ahụ, wụnye na-agba ọsọ ahụ Windows mbipute a ngwa.
Nzọụkwụ 1: Import 3GP faịlụ ka 3GP ka MOV (QuickTime) Ntụgharị
Pịa "Tinye Files" nhọrọ a usoro si window Ibu Ibu 3GP faịlụ i chọrọ gbakwunye na a usoro. Ma ọ bụ i nwere ike na-ịdọrọ & dobe 3GP faịlụ a usoro. N'ihi na nke nkwado nke ogbe akakabarede, n'oge a, ị nwere ike mbubata ọtụtụ 3GP videos.
Nzọụkwụ 2: Họrọ MOV na ịtọ H.264 dị ka video codec
Mepee format ndọpụta ndepụta ma họrọ MOV na "Format"> "Video" nhọrọ. Ihe bụ ihe ọzọ, ị chọrọ ka H.264 ka video codec na "Mwube" dialog window site na ịpị gear button na isi interface.
Cheta na: Ọ bụrụ na ihe mere ị tọghata 3GP ka MOV bụ nnọọ n'ihi na ojiji na Apple ngwaọrụ, dị ka iPod aka, iPhone, iPad na Apple TV, ebe a, ị nwekwara ike ozugbo họrọ otu kachasị mmepụta format ke "Apple" udi.
Tupu akakabarede, ọ bụrụ na ị chọrọ dezie gị videos, dị nnọọ pịa Dezie button ịbanye edezi interface. Ị ga-ahụ nke a ngwa-enye gị nhọrọ ka ubi videos, ịgbanwe video mmetụta, nakwa dị ka enye gị ohere tinye watermark na sobtaitel gị video.
Nzọụkwụ 3: Malite 3GP ka MOV (QuickTime) akakabarede
Mgbe e mere ihe nile, ị dị nnọọ mkpa kụrụ "tọghata" ka a 3GP ka MOV Video Ntụgharị ime ndị fọdụrụ ihe unu. N'ezie, i nwere ike ka ọ na-agba ọsọ na ndabere otú i nwere ike ime ihe ndị ọzọ na PC gị.
Olee otú iji tọghata AVCHD ka MOV